Xildhibaan Odawaa oo soo bandhigay 3 qodob oo xal u noqon kara muranka Galmudug – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana degaan doorashadiisa ay tahay Galmudug ayaa soo bandhigay qodob muhiim ah oo xal looga gaari karo dhibaatooyinka heesta Galmudug sida uu ku sheegay hadal uu jeediyay.
Xildhibaan Odawaa ayaa ka dalbaday Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay faragelinta ka joojiso Maamulkaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay ka bixi waayay khilaaf hareeyay Shaqooyinkii Maamulkana meesha ka saaray.
“Meel adag ayuu marayaa xaalka Galmudug waxeyna u baahantahay in laga joojiyo dhibaatada hadii aysan wax u galin dadka faragelinta ku haayo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa oo katirsan Golaha Shacabka.
“Masuuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan faragelinta Galmudug oo 2 sano oo khilaaf ah ku jirto” ayuu yiri Xildhibaan Odawaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa Waxa uu ku baaqay in la sameeyo Saddex qodob oo xal u noqon kara arrimaha ka taagan xilligan Galmudug, kuwaas oo looga baahan yahay inay dhaqan geliyaan Masuuliyiinta Dowladda Federaalka iyo dadka kasoo jeeda degaanada Galmudug.
Qodobada uu ku taliyay Xildhibaan Odawaa ee Saddexda ah ayaa kala ah:-
In kulan wadatashi ah loo qabto dadka degan Galmudug islamarkaana ay ku go’aamiyaan aayaha Galmudug.
In dowladda federaalka Soomaaliya doorkeeda ahaado isu soo dhaweyn iyo isu keenidda dadka ku nool Galmudug balse aysan aheyn in sii kala fogeyso.
In doorasho hogaan cusub la wada qabto ayadoo loo wada dhanyahay oo aan magaalooyin ama kooxo gaar ahi wax is bidin.
Xildhibaan Cabdiraxmaaan Maxamed Xuseen ayaa sidoo kale ku taliyay in dadka Galmudug ay ka fikiraan Mustaqbalka iyo wada-noolaasho dhab ah.
“Shacabka Galmudug waa in ay kala doortaan mustaqbal la wada leeyahay iyo mid nin iska celis ah oo saameyntiis fog ku reeba,waxaana u sheegayaa in ay magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud aan u joogno in la sameeyo isku tanaasul iyo is dhageysi” ayuu yiri Cabdiraxmaan Odawaa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.